Wararka - Hababka wax soo saarka dayactirka ee caadiga ah
U isticmaal saabuun fudud sida saabuunta dhaqda dareeraha iyo biyo diirran nadiifinta. Si fiican u biyo raaci si aad uga saarto dhammaan saabuunta si tartiib ah u qalaji. Masax meelaha dusha ka nadiifi oo gebi ahaanba biyo ku dhaq biyo isla markiiba ka dib codsi nadiifiyaha ka dib. Biyo raaci oo qalaji wax kasta oo dusha ah oo ku soo dhaca dusha sare.
Tijaabada Koowaad - Had iyo jeer ku tijaabi xalkaaga nadiifinta aag aan muuqan ka hor intaadan ku darin dusha oo dhan.
Ha u oggolaan in nadiifiyeyaashu ay qoyaan - Ha u oggolaan in nadiifiyeyaashu ay ku fariistaan ​​ama ku qoyaan wax soo saarka.
Ha Adeegsan Maaddooyinka Caddaaraa - Ha u isticmaalin nadiifiyayaal xoqan oo xoqin kara ama caajin kara dusha sare. Isticmaal isbuunyo jilicsan oo qoyan ama maro. Weligaa ha u isticmaalin walxaha wax xoqin sida burushka ama suufka wax lagu nadiifiyo si aad u nadiifiso dusha sare.
NADIIFINTA SOO SAARKA SOO SAARKA BULSHADA
Xaaladaha biyaha way ku kala duwan yihiin dalka oo dhan. Kiimikooyinka iyo macdanta ku jirta biyaha iyo hawada ayaa isku dari kara si ay saameyn xun ugu yeeshaan dhammaadka alaabtaada. Intaas waxaa sii dheer, lacagta nikkelku waxay wadaagaan astaamo isku mid ah iyo muuqaal leh qalin nadiif ah, in yar oo la sumeeyo waa caadi.
Daryeelka alaabada chrome, waxaan kugula talineynaa inaad tirtirto wax kasta oo saabuun ah oo aad si tartiib ah ugu qalajiso maro jilicsan oo nadiif ah isticmaal kasta ka dib. Ha u oggolaan in waxyaabaha ay ka mid yihiin daawada cadayga, mashiinka cijiyaha lagu nadiifiyo ama nadiifiyeyaasha dhuumaha dushiisa inay ku sii jiraan dusha sare.
Daryeelkaani wuxuu ilaalin doonaa dhalaalka sare ee wax soo saarkaaga oo wuxuu iska ilaalin doonaa dhibcaha biyaha. Codsi marmar ah oo wax saafi ah, oo aan walbahaar lahayn ayaa waxtar u leh ka hortagga bucshiifka barta biyaha iyo iftiinka khafiifka ah ee maro jilicsan ayaa soo saari doonta iftiin sare.
DARYEELKA BARNAAMIJYADA MIRROR
Alaabada muraayadaha ayaa laga dhisay quraarad iyo qalin. U isticmaal kaliya maro qoyan si aad u nadiifiso. Amonia ama nadiifiyeyaasha ku saleysan khalka waxay dhaawici karaan muraayadaha wax weerara oo waxyeeleeya geesaha iyo gadaasha muraayadaha.
Markaad nadiifinaysid, ku buufi dharka marna waligaa toos ha ugu buufin wejiga muraayadda ama dusha sare ee hareeraha. Daryeelka waa in had iyo jeer la qaadaa si looga fogaado helitaanka geesaha iyo taageerada muraayadda. Haddii ay qoyaan, isla markiiba qalaji.
Ha ku isticmaalin nadiifiyeyaal wax tirtira wax ka mid ah muraayada.
Waqtiga boostada: Meey-23-2021